Lumbini Online | » विवाह मण्डपमै बेहुलीले लिइन् बेहुलाको आइक्यू जाँच, बेहुलो फेल भएपछि बिहे रद्द विवाह मण्डपमै बेहुलीले लिइन् बेहुलाको आइक्यू जाँच, बेहुलो फेल भएपछि बिहे रद्द – Lumbini Online
विवाह मण्डपमै बेहुलीले लिइन् बेहुलाको आइक्यू जाँच, बेहुलो फेल भएपछि बिहे रद्द
Lumbini Online December 12, 2015
दुनियामा के के मात्र विचित्र घटना हुनसक्छन् भन्या ? हुँदाहुँदा बिहेको मण्डपमै बेहुलाको आइक्यु जाँच लिन थालिएको छ । त्यो पनि बेहुलीले नै । अनि आइक्यु जाँचमा बेहुलो फेल भएपछि बिहे नै रद्ध भएको छ र जन्तीहरु दुलही नलिइकनै फर्किनुपरेको छ ।
घटना छिमेकी देश भारतको उत्तरप्रदेशस्थित मैनपुरीको हो । आइक्यु टेष्टमा हुनेवाला बेहुलो फेल भएको भन्दै बेहुलीले विवाह मण्डपबाटै बिहे भंग भएको घोषणा गरिन् ।
बेहुलीको नाम खुसबु सक्सेना र बेहुलाको नाम ओमविर सिंह हो । ओमविरले स्नातक पास गरेको बताइएको थियो । सोमबार बिहे समारोह चलिरहेको थियो । ओमविरले बिहेको जग्गेमा पण्डितले भन्न लगाएका मन्त्रहरु पनि राम्ररी पढ्न नसकेपछि बेहुली खुसबुलाई शंका लाग्यो ।
ओमविरले मन्त्र राम्रोसँग भन्न नजानेको भनेर खुसबुलाई उनीहरुले साथीहरुले पनि सुनाएका थिए । त्यसपछि खुसबुले हुनेवाला दुलाहाको गणितको आइक्यु परीक्षा लिने निधो गरिन् । उनले विहे मण्डपमै परीक्षा सुरु गरिन् ।
उनले ओमविरलाई मोबाइलमा आफ्नो नम्बर डायल गर्न भनिन्, तर ओमविरले मोबाइल नम्बर पूरै सम्भिmनै सकेनन् । साथै उनले ६९ र ७९ बीच कतिको अन्तर हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि दिन सकेनन् ।
वास्तवमा खुसबुले आफ्नो हुनेवाल लोग्ने निकै लोद्दर भएको भेउ पाएपछि ओमविरका बाउ तथा भाइसँग एउटा सर्त राखिन् मण्डपमै । आफुले एउटा परीक्षा लिने र त्यसमा पास भएमात्र ओमविरसँग बिहे गर्ने । उनले ओमविरलाई केही सिक्का दिएर त्यसको संख्या जोड्न पनि लगाइन् । त्यसमा पनि ओमविर पास हुन सकेनन् ।
ओमविरलाई एउटा टचस्क्रिन फोन दिएर त्यसलाई प्रयोग गर्न लगाउँदा पनि ओमविरले सकेनन् । फोनको एप्स देखेरै ओमविर अलमलमा परे । त्यसपछि खुसबुले दह्रो मन गरेर ओमविर सँग बिहे नगर्ने फैसला गरिन् । ओमविर तथा उनका बाउ लगायतले खुसबुलाई सम्झाउने धेरै कोसिस गरे । तर उनले मानिनन् । अन्ततः दुलही नलिइकनै बेहुलो सहित जन्तीहरु रित्तो हात फर्किनुपर्यो ।
कुकुरको पनि बन्ध्याकरण !
धर्मका नाममा ठगिगर्नेहरुदेखि होसियार : पञ्चांग निर्णायक समिति